Ngaba abaThengisi beMxholo bakulungele ukuphazamiseka? | Martech Zone
Ngaba abaThengisi beMxholo bakulungele ukuphazamiseka?
Kwisifundo esitsha esithunywe ngu Kapost evela kwiqela laseAberdeen, uphando lufumene abathengisi abambalwa abaziva ngathi bavelisa ngokwaneleyo kwaye balanda umxholo wabo. Kwaye kubakho umsantsa oxhaphazayo phakathi kweenkokeli zomxholo kunye nabalandeli bomxholo. I-Kapost ibiza ixesha lotshintsho apho ibango liphezulu kodwa ukucwangciswa kobuchule kunqabile Imixholo Yomxholo. Bayile i-infographic engezantsi ukubeka izithintelo eziphambili (kunye nezibonelelo) zokuseka isicwangciso sokusebenza somxholo olungiselelwe kakuhle.
Nathi sonke sidala umxholo omninzi, kuyasokolisa ukuba abathengisi bangaziva ngathi bavelisa ngokwaneleyo, belanda umxholo ngokufanelekileyo, kunye nokulandela umkhondo okhokelwe kuloo mxholo.
tags: isiphithiphithi somxholoUkuThengiswa kweMpahlaukusebenza komxholoimveliso umxholokapostisizukulwana esikhokelayoUkulandelela ukusebenza
Ixhala leholide-Ixesha leNtlalo kunye neFowuni
Nov 1, 2013 kwi-3: 10 AM
Eli linqaku elihle uDouglas, ewe ulungile! Abathengisi ngokwenene baphantsi koxinzelelo lokwenza umxholo omkhulu. Isiseko esikhulu somxholo kukuba kufanelekile ukuba ibe yeyendalo, yoqobo kunye noyilo.